UMengameli wase-USA uhlela umhlangano nowaseRussia - Bayede News
Impilo yabantu ingaphezu kwelungelo lobunikazi bemigomo yokhuvethe
UMengameli wase-USA uJoe Biden uthi ulindele ukuthi uzokwazi ukuhlangana noMengameli waseRussia uVladimir Putin maduze kanti iWhite House ithe ukungaboni ngaso linye okuqhubekayo phakathi kwala mazwe ngeke kudingeke ukuthi kulungiswe ngaphambi komhlangano ohlelwayo.
UBiden utshele izintatheli eWhite House ukuthi ufuna ukuhlangana noPutin yize iRussia iqhubeka nokwandisa inani lamabutho eduze nase-Ukraine.
“Akusithinti isifiso sami sokuba nomhlangano naye ngqo futhi uma ubukisisa uzobona ukuthi bekunamasotsha amaningi phambilini. Manje kuvela ukuthi usewahoxisile amanye amasotsha,” kusho uBiden. Ebuzwa ngokuhlangana noPutin ngoNtulikazi, uthe: “Ngiyathemba ukuthi sizokwazi ukukwenza. Asinaso isikhathi esithile noma indawo ethile. Lokho okwamanje kusahlelwa.”
Izwe i-USA emasontweni ambalwa edlule noma ngemuva kokuthi iRussia yandise inani lamabutho, lithe liyayeseka i-Ukraine phakathi kwalokhu uNobhala Wombuso wase-United States u-Antony Blinken kuleli sonto akubize ngokwanda kwenani lamasotsha aseMoscow “ngobudedengu”.
UBiden nabeluleki bakhe bangathanda ukwengeza umhlangano noPutin ezweni lesithathu ngenkathi uMengameli wase-US esezwenikazi i-Europe maphakathi noNhlangulana lapho ezoba nomhlangano weGroup of Seven eBritain futhi abe nezingxoxo nabalingani benhlangano iNATO eBrussels. Kodwa izingxoxo nabaseRussia mayelana nokubamba umhlangano ziyaqhubeka, kusho okhulumela iWhite House uJen Psaki (osesithombeni) ngesikhathi ekhuluma nabezindaba.
“Sisebenza ukwenza amalungiselelo – indawo, isikhathi, i-ajenda, yonke imininingwane – obekuzohlala kwenzeka ezingeni lezisebenzi. Kusezandleni zazo ukuthi yini ezifuna ukuyizuza, ” kusho uPsaki I-USA inezikhalo eziningi eziqondiswe kuRussia, okubandakanya nokuphatha kwayo lowo ogxeka uHulumeni waleli lizwe osejele u-Alexei Navalny. Kepha uPsaki uthe lezi zikhalazo azidingi ukuxazululwa ngaphambi kwengqungquthela phakathi kwalaba baholi bala mazwe abalwa njenganamandla emhlabeni jikelele.
“Ngokusobala, amalungelo abantu, inkululeko yokukhuluma, amagugu konke lokhu kuyizinkinga uMengameli, uNobhala Wombuso u-Antony Blinken, uMeluleki Wezokuphepha Kazwelonke uJake Sullivan abazidlulise kozakwabo. Kepha isimemo sengxoxo nomhlangano asizange sinikezwe ngemfuneko yokuthi yonke inkinga ixazululwe ngaphambi kwesikhathi. Silindele ukuthi sisazoqhubeka sibe nokungaboni ngaso linye,” kusho uPsaki.
Anathi Mtaka May 14, 2021